"तिमी तारे भिर" ३ दिनमै १० लाख बढी दर्शकले मन पराए। पबित्र सुब्बाले भावुक हुँदै अतीत सम्झेर यस्तो भनिन। - Pabitra TV
भर्खरै आएको चर्चित तथा मर्मस्पशि गित “तिमी तारेभिर” मेल भर्सनमा गायक रेवत राईले गाए सङ्गै पुरानो गायिका पबित्र सुब्बाले आफ्नो बिगत सम्झिदै आफ्नो फेसबुक मा यस्तो लेखेका छन। हेर्नुहोस वहाको जस्ताको तस्तै स्टाटस
लगभग 28 बर्स पहीले मैतिदेवि डेरामा यो गीत पहीलो पटक शान्तिरामजीले सुनाउनु भएको थियो ।वंहा सॅगै गीतकार श्रवणजी पनि आउनु भएको थियो । वहां दुवैजनासॅग चिनजान गराईदीनु भएको थियो नविन सुब्बाजीले (निर्देशक)। नविनजीले पहील्यै वहां दुवैको वारे जानकारी दीईसक्नु भएको थियो र भन्नु भएको थियो “शान्तिजी र श्रवणजी दुवै नयाँ भए पनि धेरै प्रतिभाशालि छन्, तिमीले एक पटक वहाँहरुको गीत सुन्नै पर्छ”। म पनि त्यसबखत नयाँ नै थिएँ, संधर्षरत थिएँ।तै नि मेरो दुईवटा गीतहरु “चन्द्रमा र चखेवा” र “ पुर्णिमाको जुन” दर्र्शक स्रोताले निकै मन पराईदीएको थियो ।अब आफनो पहीलो Solo Album बजार मा ल्याऊनु पर्छ भन्ने लागेर नयां गीतहरुको खोजीमा थिएँ।संजोग मिलेको रैछ । भोलि पल्ट नै वहाँहरुसंग भेट भो ! चिनजान त्यही बेला भो । शान्तिजीले मेरो हार्मोनिममा जब ”तिमी तारेभीर ” बोलको गीत गाएर सुनाउनु भो! गीत सुन्ने बितिक्कै मलाई यति मन पर्यो , भनिहालें “शान्तिजी यो गीत मेरो भयो है !” मेरो कुराले हामी तिनै जना मस्तै मुस्कुराएका थियौ।त्यो अनमोल पल आज झलझलि सम्झीरहेकी छु!
समय कति छीटो बग्दो रै छ त ! आज तारेभीरको Male version पनि सुन्न र हेर्न पाउदां मलाई धेरै खुशी लागेको छ । नयां पुस्ताले पुराना पुस्ताका सिर्जनाहरुलाई सम्मान गरेको देख्दा खुशी लाग्दो रैछ । रेवत राई भाई यसको लागी धन्यबादको पात्रो हुनुभो। बिशेष यो गीतको Video ले धेरै दर्शकस्रोताहरुको मन तान्न सफल हुने कुरामा विश्वस्त छु । दयाहाङ राई मलाई धरै मन पर्ने कलाकार हो। वहांको बेजोड अभिनयले तारेभीर गीतलाई जिवन्त बनाएको देखें। साथै नायिका मिरुना मगरको अभिनय र सुन्दरताले मलाई मख्ख बनायो! नेपालीपनको भेषभुषाले खुलेको छ! झट्ट हेर्दा उनकै आमा शशी सुब्बा जस्तै देखीएकी छिन । शशी सुब्बा पनि प्रतिभाशाली कलाकार थिईन। संजोगकै कुरा हो! साथीको छोरीले आज तारेभीरमा अभिनय गरेको देख्न पाउदा सुखद अनुभव गरेकी छु।
समग्ररुपमा भन्नु पर्दा तिमी तारेभीर गीत राम्रो बनेको छ ।
फेरी पनि तारेभीर गीतलाई सबैले मनपराई दीनुहुन्छ भन्ने पुर्ण आशा गरेकीछु । सम्पुर्ण Team लाई मेरो तर्फबाट शुभकामना र बधाई 🌸🌸
– पबित्र सुब्बा
भिडियो यहा हेर्नुहोस
Tags: तिमी तारेभिर, तिमी तारेभिर मेल भर्सन, दयाहाङ्ग राई, नेपाली गित, पबित्र सुब्बा, मिरुणा मगर, रेवती राई